အစိမ်းလမ်း (၇) | နတ္ထိ
ရှိခြင်း မရှိခြင်းရဲ့ အခြားတစ်ဖက်
ဝရော ဧကောဝ သိဒ္ဓတ္ထော။
ဝသလံ ဒေဝ၀ါဟိနိံ။
ပထ၀ီမြေအထုက သက်သေပြုခဲ့သည် မဟုတ်ပါလား။
ပါဠိစာပေရဲ့ အလင်္ကာအလှ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ စင်္ကြာဂါထာကို အရမ်း နှစ်သက်တယ်။ ဒီဂါထာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောခဲ့ဖူးတယ်။ ‘ဝ’အက္ခရာကို အလည်မှာ တည်ထားလို့ ဝစင်္ကြာဂါထာလို့ ခေါ်နိုင်မယ်။ စက်ဝိုင်းတွေနဲ့ ပုံဖော်လေ့ရှိတယ်။ ကိုယ်ပိုင်ဟန်အနေနဲ့ ဗောဓိညောင်ရွက်တွေနဲ့ ဖန်တီးထားလို့ ဗောဓိစင်္ကြာဂါထာလို့ ခေါ်ချင်တယ်။
ဒီဂါထာမျိုးတွေ မရေးဖြစ်တော့တာ ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုနီးပါး ရှိနေပြီ။ ဘဝဟာ ဒီလိုပါပဲ။ ဝလုံးကလေးကိုမှ ဝိုင်းအောင် မရေးနိုင်ဘူး။ အမြဲတမ်းလဲ မဝနိုင်ဘူး။ မဝတဝဖြစ်နေတာ များတယ်။ ကိုယ့်အကြောင်းနဲ့ ကိုယ်ပါပဲ။ ကိုယ့်လမ်းကိုယ်လျှောက်တာပါပဲ။
လမ်းဆုံးကို မရောက်ခင် လမ်းဆုံတွေ ကြုံရမှာပါ။ လမ်းမှန်ပေါ် မရောက်ခင် လမ်းမှားတွေ ကြုံရမှာပါ။ လမ်းကောင်းပေါ် မရောက်ခင် လမ်းဟောင်းတွေ ကြုံရမှာပါ။ လမ်းပေါ် မရောက်ခင် လမ်းပျောက်တွေ ကြုံရမှာပါ။ လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ “ဆူးခင်းလမ်း မာခေါင်ခေါင်မှာ ဖိနပ်မပါတဲ့ ငါ GPSရှာမရသကဲ့သို့” ဖြစ်နေတာ အမှန်ပါပဲ။
This entry was posted on June 14, 2013 at 10:29 pm and is filed under ခရီးသွား, ဂါထာ, စာတိုပေစ, စင်္ကြာဂါထာ, ပုံရိပ်.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
4 Responses to “အစိမ်းလမ်း (၇)”
June 15, 2013 at 6:49 am | Reply
ကောင်းလိုက်တာ လွန်ထားထား ၀တ္ထု ဘယ်ဖတ်မလဲ
June 15, 2013 at 5:30 pm | Reply
Ashin Janaka Says:
June 15, 2013 at 5:25 pm | Reply
ကြည့်ရင်းကြည့်ရင်း စကြာဘီးကြီး ညာဘက်ခြမ်းကို လှိမ့်သွားတော့မယောင်ယောင်။ ဘ မပါတဲ့ ၀။ ဘ၀ ဖြစ်ဖို့ ဆက်လှိမ့်ရုံဘဲပေါ့။း)
June 15, 2013 at 5:33 pm | Reply
London Eyeကြီးလို ပတ်လည်ရိုက်နေမှာပေါ့ 🙂